Grumman Mallard sano 2 4 bilood ka hor #957
Waan ka baqay haddii aan ku heli karo diyaaraddaan inay si sax ah u raraan ... waxa kaliya ee aan helayaa waa qiiq cufan meeshii ay ahayd inay noqoto. Waxaan ku tusiyay faylka saxda ah, iyo markaan furo feylkaas, SEEMS rakibaadda si ay u muuqato sifiican, sida saxda ah ee ay tahay inay u ahaato. Laakiin marka aad dooranayso diyaaradda, ma jiraan sawir-fiirin hore ah oo in kasta oo diyaaradda ay ku tusayso diyaaradda la xushay, ma soo baxdo (oo keliya qiiqa qiiqa). Waan isticmaalayaa P3D V4.2.
Dhibaatada la mid ah Grumman Albatross. Malaha uma fiicna 4.2?
Tafatirka ugu dambeeya: Waxaa qoray jdlinn.
Grumman Mallard sano 2 4 bilood ka hor #959
Waqtigaan, Mallard iyo Albatross lama jaanqaadi karaan P3D v4 maxaa yeelay moodooyinkooda waxaa loo sameeyay FS2004, sidaas darteed, ma ahan kuwo la jaan qaada 64 baararka. P3D v4 waa 64 baloog oo kaliya mana laha dhaxal loogu talagalay moodooyinka 32bits. Macluumaadkan waxaan ku sixi doonaa boggaga kuwaas add-ons.
Si kastaba ha noqotee, Milton Shupe wuxuu hadda sameynayaa beddelaad u dhalatay Mallard oo ay dhowaan la shaqeyn doonto P3Dv4. Waxaan cusboonaysiin doonnaa faylka isla marka la shaaciyo.
Grumman Mallard sano 2 4 bilood ka hor #960
Super oo ka jawaaba su'aalaha. Mahadsanid.
Grumman Mallard sano 2 4 bilood ka hor #997
Mallard hadda waa la waafaqay P3D v4, nooc cusub ayaa la sii daayay
Grumman Mallard sano 2 4 bilood ka hor #998
Mahadsanid Erik! Soo degsashada hadda.